Mustaqbalka Heshiiska Oromada Iyo Soomaalida. – Ahmed A. Abdulahi
Mustaqbalka Heshiiska Oromada Iyo Soomaalida.
AhmedAbdiAbdulahi	Uncategorized	 August 4, 2019 August 4, 2019 1 Minute
By Ahmed Abdi Abdulahi. 8-4-2018
Heshiiska Oromada Iyo Soomaalida ayaa maalintii 3aad kasocda caasidamada DDS ee JigJiga. Heshiiskan ayaa ahaa mid ay iska kaashanayaan Labada deegaan ee ay colaadu kadhaxayso.
Colaada Oromada Iyo Somaalida ayaa ah kuwa salka kuhayay arimo laxidhiidha xuduudaha labada dawlad deegaan laakiin waxay xiisada sii xumaatay madaxwaynihii hore ee Cabdi maxamuud cumar xilka hayay. Dadbadan ayaa aaminsan in colaada ay ahayd mid lasiyaasadeeyay oo aan waxba raad kulahayn arimaha khilaafka xuduudahaha. Marhore ayay ahayd markii dad ganacsato ahaa lagu gawracay magaalada Awaday ee oromoda taasina waxay horseeday khilaaf cusub oo hakad galiyay cilaaqaadka labada deegaan iyagoo guud ahaanba iskusocodka labada deegaan hakadgalay Mudo dheer.
Hadaba intee in Le’eg ayuu hashiiskani waxkabadalidoonaa Arimaha Amaanka, Ganacsiga, Iyo isdhexgalka Labada deegaan? Rajo intee Le’eg ayayse xambaarsantahay Kulamadani? Hadii aad Cabirto dareenka dadka Soomaalida, Iftiin wayn ayaa runtii umuuqda. Waxayna qabaan rajo Wayn oo soo afjarikarta waxa aydadku aaminsanyiihiin inuu ahaa “khillaafkii siyaasadaysnaa” ee udhexeeyay Labada deegaan.
Qormadaydan waxay taxane katahay maqaalada aan kudaabaco bartayda Word-press blog gayga. Taasi oo ah goob aan kusoo daabaco arimaha Codka Iyo arimaha dadka soomaaliyeed. Hadii aad qoraalkaygan kahesho fadlan iisheergaree Si’aan dadbadan ugaadho taasoo igacaawindoonto inaa daalacasho badan yeesho.
Next Post EPP unionization, a danger looming towards Somalis